‘साग’ मा पुरूषलाई पुरुषलाई पछि पार्दै इतिहास रच्ने महिला मात्रै ! – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/‘साग’ मा पुरूषलाई पुरुषलाई पछि पार्दै इतिहास रच्ने महिला मात्रै !
‘साग’ मा पुरूषलाई पुरुषलाई पछि पार्दै इतिहास रच्ने महिला मात्रै !
विश्वका धेरै मुलुकहरूमा जस्तै नेपालमा पनि अझै महिला र पुरुषबीच ठूलो बिभेदको अवस्था छ। सामाजिक,आर्थिक, शैक्षिक,राजनितिक,प्रसाशनिक, खेल लगायतका सबै क्षेत्रमा पुरूषको तुलनामा महिलाको पँहुच न्यून नै रहेकाे पाइन्छ ।
महिलालाई नेतृत्वमा स्थापित गराउनका लागि कानुनहरू बनेका छन् । ३३ प्रतिशत सहभागिताको कुरा पनि विस्तारै कार्यान्वयनको अवस्थामा छ । तर, राजनीतिक दलहरूमा समेत महिलाहरूको ३३ प्रतिशत सहभागिता भएको छैन ।
महिलाहरूले पनि अवसर पाए भने पुरुषले भन्दा राम्रो काम गरेर देखाउन सक्छन् भन्नेको एक उदाहरण हो- १३ औँ दक्षिण दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) । घरेलु मैदानमा भएको साग नेपालका लागि ऐतिहासिक मात्रै नभएर महिलाहरूले हामी पनि कम्जाेर छैनाैँ भनेर प्रमाणित गरिदिएका छन् ।
सागकाे एकै संस्करणमा ५१ स्वर्ण जित्दै नेपालले इतिहास रचेकाे छ । देशलाई ऐतिहासिक सफलता दिलाउन सबैभन्दा ठूलो भूमिका महिला खेलाडीहरूले गरेका छन् । १३ औं सागमा पुरूषकाे तुलनामा महिला खेलाडीको प्रदर्शन अब्बल देखिएको छ । महिला खेलाडीले ‘नसोचेको’ सफलता हात पारेका छन् ।
यसपालीकाे सागमा महिला खेलाडीले अपत्यारिलो प्रदर्शन गरेर धेरैलाई चकित बनाएको छ । ५१ स्वर्णमध्ये २९ स्वर्ण भने महिला खेलाडीहरूले जितेका छन् । यतिमात्र नभइ महिला नेपाली खेलाडीले एकपछि अर्को ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरिरहेका छन् ।
इजरायलमा नेपालीका लागि रोजगारी खुल्यो , ५०० कामदारको माग, १५०० अमेरिकी डलर तलव हुने !
कोरोनाका बिरामी यत्रयत्र छन्, कोरोनाबाट जोगिन यस वर्षको तीज घरमा नै बसेर मनाऔँ
इतिहार रच्दै गौरिकाले भनिन् : म नेपाली हुँ , मैले जितेको पदक नेपालको हो ’
महानायक राजेश , विराज र निखिलको अभिनय रहेको ‘खलनायक’ को सिक्वेल बन्ने पक्का, अर्को महिनाबाट छायांकन हुने
आज १ सय ६० जनाले कोरोनालाई जितेर घर फर्किए